Banyere JIANGSU TISCO ụlọ ọrụ CO., LTD | JIANGSU TISCO ụlọ ọrụ CO., LTD
JIANGSU TISCO ụlọ ọrụ CO., LTD e hiwere na 2008, ọkachamara na-amị igwe anaghị agba nchara igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara efere, igwe anaghị agba nchara anwụrụ, igwe anaghị agba nchara mmanya , profaịlụ nchara na alloy na ngwaahịa. N'ime afọ 12 gara aga, ISlọ ​​ọrụ TISCO eguzobeala usoro nmekorita ya na otutu ulo oru ndi ama ama ama ama dika: MASTEEL, BAOSTEEL, TISCO, ZPSS, RIZHAO, JIGANG, SHOUGANG GROUP, SSAB, JISCO. Anyị na-obibi alloy ngwaahịa na duplex anaghị agba nchara ngwaahịa nke ụwa praịm ụdị dị kaInconel series, Monel Series, Hastelloy Series, Titanium were gabazie.
Mgbe afọ iri na abụọ nke ngwangwa mmepe, TISCO Industrial aghọwo oge a keukwu ígwè ọrụ enterprise nke pụrụ iche na nhazi, ahịa na oru ọrụ na ubi nke igwe anaghị agba nchara ngwaahịa. Tisco Industrial nwere ngwa igwe eji arụ ọrụ igwe nke na-enye nyiwe nhazi ọkachamara:ịcha, egweri, akpụ, ịgbado ọkụ, ọgwụgwọ okpomọkụ, ịkpụzi, na ịgba. Ọzọkwa, Tisco Industry nwekwara ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na kemịkal kemịkalụ iji hụ na ngwaahịa ruru eru.
Jiangsu TISCO Industrial guzobere 10 nhazi ọrụ emmepe na Wuxi, Wuhan, Hangzhou, Tianjin, Taiyuan, Zibo, Jingjiang, Tai'an, Jinan na Jiaxing na China. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ Tisco na-ekpuchi mpaghara 150,000Has nweela 1,300 ndị ọrụ. Tisco kpebisiri ike ịghọ "ígwè nhazi na ọkọnọ center nke n'ichepụta ụlọ ọrụ"na"ụlọ ọrụ yinye ụlọ ahịa nke igwe anaghị agba nchara"ke China. Mgbe ihe ọhụrụ na ịchụso ịdị mma, Tisco Industry nwere ọtụtụ ndị na-eweta ụwa ama ama, yana 100,000 tọn nke igwe anaghị agba nchara na stocking kwa afọ.
Ahia anyị na-agbasawanye n'ihi mmepe na-aga n'ihu na afọ ndị a, ma ugbu a, anyị guzobere ụlọ ọrụ ọhụrụ aha ya bụ Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Jiangsu Jikọọ Industrial Co., Ltd ugbu a bụ ngalaba nke Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd
Ịrụ ọrụ ika